Ramadaanka iyo saacadaha badan oo la soomo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ramadaanka iyo saacadaha badan oo la soomo
Ramadaanka iyo saacadaha badan ee Iswiidhen
Sida caadiyanba dhacda waxaa jirta fasax ey shaqaaluhu xaq u leeyihiin sannad walba sidii ey uga soo nasan lahaayeen hoowlaha ey soo hayeen mudada 11-ka bilood ah ee sannadka. Iyadoo inta badan la qaato fasaxyada dalkan Iswiidhen bilaha lagu guda jiro xilliga kuleeylaha. Waa hoowl u baahan qorshe iyo diyaar-garow hadba halkii iyo goortii la qaadan lahaa. Dadyoowga muslimiinta ayaa qaar badan oo ka mid ah waxey ku aadiyaan fasaxooda kuleeylaha haddii ey suurtagal tahay bisha amadaan, waa kolka uu ku soo aado xilliga kuleeylaha oo saacado badan dalkan laga sooman yahay oonta iyo biyaha intaba, sida uu sheegay Mustafa Axmed, oo ku dhaqan magaalada Göteborg:
Mustafa Axmed ayaa labaddii sannadood ee ugu dambeeyey oo bisha Ramadaank u soo beegantay bilaha kuleeylaha oo wakhti badan la soomo ey u suurtagashay inuu fasaxiixsa ku beego bisha Ramadaanka, isla-markaana ey isaga iyo reerkiisuba ku soo qaataan dalka dibaddiisa iyo dal ey qorraxdu horay uga dhacdo kolka loo barbar-dhigo saacadaha ay qorraxdu dalkan ka soo jeedo ama la sooman yahay, hase eeshee ay sannadkan u suurtageli wayday middaa. Mustafa Axmed iyo mar kale:
Dhanka kale ayey jiraan dadyoow iyaguna sooman bishan kuleeylaha isla-markaana aaney sababo daraadood ku khasbanaada iney sooman yihiin saacadaha sidaa u badan iyaga oo weliba shaqadoodiina halkooda ka sii wada.
Xaafadda Södermalm oo ka mid ah xaafadaha magaalada Istockholm ayuu ka howl-galaa makhaayadda Ayasofya Mikael Topal, isaga oo weliba sooman. Isla-markaan ku dhex jira goob ey indhihiisu mar walba cunnada qabneyaan. Isagoona sheegay in aanu wax dhibaato ah middaa u arag. Soonka iyo cunnada hor-taal. Waa in aroortii intaanay qorraxdu soo bixin loo tabaabusheeystaa gaajada:
- Waxaan cunaa qare aad u fara badan iyo faramaajada nooca dufanka badan si aanan u harraadin saacadaha la sooman yahay. Raashinka maqaayadda makay noqoto waan iska indha xiraa oo kama fekero.
Marka waxaad leedahay kuma dareemo soo jiidasho?
- May, niyadda ayaan ka xirtaa. Marka wax dhibaato ah ma leh, sida uu sheegay Mikael Topal på restaurangen Ayasofya i Stockholm.
Axmed waa dareewal basaska rakaabka ee dad-weeynaha, hase yeeshee howl-gala isaga oo sooman:
- Bulshadu waxay iminka u leedahay diinta islaamka macluumaad ka badan middii ey horay u qabi jirtey. Saacaddaha sidaa u badan waxaa la tijaabin karaa in la soomo maalin, laba maalmood adiga oo sooman ina la isku wadi karo soonka iyo shaqada iyo in kale. Waxaa ii soo baxdey in aaney suurtagal ahayn. Marka maalmaha aan fasaxa ahay ama ku jiro fasaxeyga ayaan soomaa ama soomi kaaa, sida uu Axmed sheegay oo hoowshiisii halkii ka sii waday.
Tomas Hedenius, ahna madaxa war-baahinta ee shirkadda arriva, oo uu Axmed a howl-galo ayaa sheegay iney intii karaankooda ah isku dayaan sidii muslimiinta loo soo dhoweeyn lahaa rabitaankooda muddada lagu guda-jiro bisha ramadaan. Halka qaar badan ey fasaxyadooda ku abbaaraan bisha ramadaan inta lagu guda jiro. Middaasina oo aaney wax caqabad ah kala kulmin:
- Haa, wax caqabad ah kalama aanan kulmin middaa. Waa su'aal aannu ka doono snnad walba, hase yeeshee aan wax dhibaato ah lagala kulmin, sida uu hadalka u dhigay. Tomas Hedenius.
Marka laga yimaado fasaxyada ey shaqaalaha muslimiinta ee dalkani ku beegtaan bisha Ramadaan ayey soomaali badani sidoo kale la beegtaan iney kaga faa,iideeystaan oo ey u safraan waddamo ey qorraxdu horay uga dhacdo. Hase yeeshee middaasi u baahan tahay qorshe ballaaran, sida uu horayba u sheegay Mustafa Axmed. Intaasina dheertahay kala duwanaanta waddanka aad ku qaadaneeyso ramadaanka iyo ciidda ramadaan. Laba arimmod isagoo ku macneeyey:
Isha: SR International/Soomaali